トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo nezingeloncedo ukhethe izinga ukusetyenziswa eliphantsi pa parlour
Lo mzuzu ndivula ucango pa parlour, zizele itafile engenanto, ube Urhashaza phezu likarhulumente, yaye oku shop'll ugcine stop, ndicinga ukuba kukho abaninzi aziboni kwizikrelemnqa. Likhangeleka street, kuba akukho nguqulelo wena awunayo, nina singenako ukuyiphika kungenzeka ukuba kukho into ethile kwezinto ezifana ukuthengiswa kunye nesevisi yabathengi kunye nenkonzo okanye iimeko site ,. Ethetha ezingeloncedo
umntu onjalo zegumbi pa, kakhulu kukho itafile simahla, itafile leyo ndicinga ukuba kukho into kule yokuba ukuqonda kunzima njani mgangatho ukhona. Ukuba yawo lujoliswe, ulahlekiso liya kwenzeka, kuya kuba nzima ukuze aphumelele. Nokuba ukuqokelela ulwazi, abathengi kwakhona ezabanjwa, ulwazi enamandla nayo ke kunzima ukuba yi.
thembela POP neephowusta, njl, kwanokuba Semeyo imodeli ubeke mandla, ngenxa yokuma esingenamntu kakhulu, yaye abaninzi kakhulu kuma akabuya, umdlalo hit okanye miss, akusekho akunike ukuba iya kuba.
apho, oko utsho engxakini enkulu ivenkile imveliso.
Nangona kunjalo, izibonelelo loo elibe pa ekhoyo. Inxalenye itheyibhile engenanto ezele, wena Maeru ukwandisa amathuba yokuwina ukuba basebenzise mhaka. Xa pa parlour yemveliso kakhulu, kangangokuba ebaleka ukuma inkulu, kukho ixesha intshukumo athile engalindelekanga. Singalahlekani kwivenkile eliphezulu bahlale, kwakhona okanye ukuba afumane imali Uyadubula.
yi Hodai ufuna ukukhetha, efana nje umdlalo omncinane, abathengi uqhelene pa okukhulu, namandla libuthiwe ezayo mkhuba, ukuba indawo oza kusebenza kuyo, badla naye abathengi wayeza kuyeka ngaphandle kokucima kakhulu, nani. Kwakhona, xa uzama win ukuqinisekisa kulo evenkileni, lwemihla ngemihla ukuqokelelwa kwedatha ngaphezulu high bahlale ivenkile iza kuba kubalulekile.
nokuba Nakuba kunjalo, ngenxa yokuba i pa parlour akulunganga lo msebenzi, kuba nzima ukufunda amaza ngamandla ukuhanjiswa nganye. Ngenxa yokuba le nguqulelo ukuba awusebenzisi, kukho kungenzeka ukuba nkqu icala shop ezingathathwanga ngokupheleleyo yi data amahle.
ukusebenza eliphezulu ivenkile pa, kukho iintlobo data entle ukuya evenkileni, kodwa kwicala ivenkile ke ngeke Yebo kuluncedo, kwi pa parlour yokusebenza ephantsi, kuba inguqulelo ukuba awusebenzisi, kunokwenzeka ukuba uthenga ngaphezulu ukuqokelelwa kwedatha kuye ube imeko enzima. I
ezinemiqathango, kukuba evenkileni kwakhona Abathengi kwakhona musa kutshintsha kakhulu. Iivenkile, okanye ukubeka ibhola nangaliphi na ixesha, zama ukubona omnye umkhwa ukubeka elimisiweyo. Naxa a pa parlour yokusebenza phantsi, oko kuthetha ukuba kunokwenzeka ukwandisa amathuba esiphumelelayo. Noko ke, nail ezityikitywe ngokuqinisa, ehleli ngenxa yokuba kukho ezininzi ukuba ndithi zonke 1, kuya kubakho imfuneko ngononophelo amanyathelo.
ubalekwe uthambekele, libya ivenkile ukubaleka kodwa, Yizani ukutshintsha indlela yokucinga, lokuwina pesenti inokuba kwakhona kuba iphupha. Abo babelinqula na pa kuphela onendawo zokusebenzisa ephantsi kufuphi, kusenokwenzeka ukuba bazame umdla ukukhuphisana ezivenkileni.
Noko ke, imvakalozwi kwanya olumnandi evenkileni ka esezantsi-operation kunokuba kubasebenzisi abaphambili. Okwangoku, ukulinganisela ngakumbi kusilela, Kucetyiswa ukuba aphinde ayakhe belinganisela evenkileni kunye nokusebenza ezithile isidanga. Kube yinto Sha. Okwangoku, ukulinganisela ngakumbi kusilela, Kucetyiswa ukuba aphinde ayakhe belinganisela evenkileni kunye nokusebenza ezithile isidanga. Kube yinto Sha. Okwangoku, ukulinganisela ngakumbi kusilela, Kucetyiswa ukuba aphinde ayakhe belinganisela evenkileni kunye nokusebenza ezithile isidanga.